Ogaden News Agency (ONA) – Israa’iil oo Weerar Duqayn Ah Ku Qaaday Dalka Suuriya.
Israa’iil oo Weerar Duqayn Ah Ku Qaaday Dalka Suuriya.
Posted by ONA Admin	/ December 3, 2017
Yuhuuda ayaa weerar gantaalo ah ku qaadday goob ay yaalleen qalab milateri oo ay leedahay Suuriya, meel ka baxsan magaalada caasimadda ah ee Dimishiq, sida uu ku soo warramay TV-ga Suuriya ee ay dawladdu maamusho.
Weerarkan ayaa khasaare gaystay, waxayse warbixintu sheegaysaa in laba ka mid ah gantaalaha laga hor tagay.
Milateriga Israa’iil wali ma xaqiijin in uu qaaday weerarka. Koox fadhigeedu yahay London oo dusha kala socota arrimaha Suuriya ayaa goor sii horaysay sheegtay in qaraxyo laga maqlay meel u dhow Dimishiq, kuwaasoo ay sheegtay in ay ka dhasheen weerar loo malaynayo in ay Israa’iil qaadday.
Baaxadda uu khasaarahu leeyahay ayaan wali la cadayn, inkastoo uu TV-gu soo wariyey in uu jiro “khasaare qalab” oo saldhigga ka dhashay. Rami Abdelrahman oo madax u ah kooxda arrimaha Suuriya la socota wuxuu u sheegay wakaaladda AFP in weerarku uu burburiyey kayd hub, ah laakinse kooxdiisu ma sheegin cidda lahayd.
Horey Israa’iil waxay u duqaysay meelo uu hub yaalay, iyadoo doonaysay in laga hor tago hub in loo qaado Xisbullah. Kooxdan sida ay sheegayso, weerarku wuxuu ka dhacay meel u dhow El Kiswah oo dhowr mayl koofurta kaga beegan Dimishiq.
Tiro masawirro ah oo dayax gacmeed lagu qaaday ayaa muujinaya dhisme ka socda meel ku taalla saldhigga la sheegay in laduqeeyay. Ra’iisul wasaaraha Israa’iil Benjamin Netanyahu ayaa hore uga digay in dalkiisu uusan ogolaan doonin in Iran ay joogitaan milateri ku yeelato Suuriya.